सडक दुर्घटनामा प्राथमिक उपचार । - Varient - News Magazine
प्रत्येक दिन सडक दुर्घटनाहरू हुन्छन् र दुःखको कुरा, सडक दुर्घटनामा घाइते व्यक्तिलाई सहयोग गर्न थोरै मानिस मात्र अगाडि आउँदछन्, जबकि यो एकदमै गलत एवंम दुखको कुरा हो। यदि त्यस्तो परिस्थिति तपाईंको अगाडि हुन्छ भने, तपाईंले पनि घाइतेलाई सहयोग गर्नुपर्दछ।
आज, यस लेखको माध्यमबाट हामी तपाईंलाई यो कुरा भन्न जाँदैछौं कि कसरी सडक दुर्घटनामा परी घाइते भएकाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक र आधारभूत कुरा जानेर, तपाईं घाइते व्यक्तिको जीवन बचाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइल नम्बरमा आपतकालिन नम्बरहरू राख्नुपर्दछ। यदि दुर्घटना भयो भने एम्बुलेन्सलाई कल गर्न सकिन्छ जसले गर्दा समयको बचत साथै कसैमा निर्भर हुनु पर्दैन।
सडक दुर्घटना भयो भने के गर्ने?
कुनै पनि सडक दुर्घटनामा घाइते व्यक्तिलाई सहयोग गर्न, सर्वप्रथम, उसको शरीरमा कुनै चोटपटक लागेको छ कि छैन हेर्नुहोस्। तपाईं उसको आन्तरिक चोटहरू पत्ता लगाउनत सक्नुहुन्न तर तपाईं शरीरमा बाहिरी चोटि हेरेर घाइतेको गम्भीरता पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
सामान्यतया, ट्राफिक दुर्घटनामा टाउकोमा र मेरुदण्डमा चोटपटक लागेको हुन्छ। त्यसकारण, घाइतेलाई मद्दत गर्दा, सबै भन्दा पहिले उसलाई सडकबाट सुरक्षित ठाउँमा लैजानुहोस्। घाइतेलाई होशियारीपूर्वक चलाउनुहोस्। घाइतेलाई कडा तरिकाले होल्ड नगर्नुहोस्। तपाईंको सानो गल्तिले उसलाई गहिरो चोट पुग्न सक्छ। दुर्घटना स्थल वरिपरि उपस्थित व्यक्तिहरूको सहयोग लिनु उत्तम हुन्छ ताकि घाइते व्यक्तिलाई कुनै चोट नपुर्याई सुरक्षित ठाउँमा पुराउँन सकियोस।
सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने प्राथमिक उपचार.
सडक दुर्घटनामा, घाइते व्यक्तिलाई धेरै तरिकाले सहयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ हामी तपाईंलाई केहि तरिकाहरूको बारेमा बताउँदैछौं, जसको सहायताले तपाई घाइते व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सबैभन्दा पहिले, बाटोमा सवार मानिसहरूलाई सडक दुर्घटनाको बारेमा जानकारी दिनुहोस्। यो गरेर तपाई घाइतेको मात्र होइन तपाईको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। र थप रुपमा हुने कुनै पनि अप्रिय घटनालाई पनि रोक्न सकिन्छ।
दुर्घटना घाइते भएको व्यत्तिको सवारीको ईन्जिन बन्द गर्नुहोस्। र त्यहाँ कुनै पेट्रोल वा वाहन बाट कुनै अन्य तरल पदार्थ चुहावट भइ रहेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नुहोस। र तरल पर्दाथको प्रवाह रोक्नुहोस्। यस तरिकाले तपाईंले अझ हुन सक्ने सम्भावित ठूलो दुर्घटनाबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पश्चात आपतकालिन बत्ती वा इमेरजेन्सी लाईट अन गर्नुहोस् ताकि आसपासका मानिसहरूले दुर्घटनाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछन्।
अब घाइतेलाई सडकको सुरक्षित ठाउँमा लैजानुहोस् अर्थात् जहाँ कुनै ट्राफिक छैन। कुनै शीशाको टुक्राहरू नभएको, र कुनै अन्य हानिकारक तत्त्वहरू नभएको ठाँउ मा घाइतेलाई लैजानुहोस।
नजिकैको अस्पताल वा पुलिस स्टेशनमा कल गर्नुहोस्। यदि बिरामी बेहोस छ, सास फेर्न समस्या भयो भने तपाईंले उसलाई तुरुन्तै सहयोग गर्नुपर्दछ। जतिसक्दो चाँडो बिरामीलाई अस्पताल लैजानुहोस्।
ध्यानपूर्वक घाइते भएको व्यत्तिको को टाउको, घाँटी र पछाडि भागहरुमा बिस्तारै समात्नुहोस्। थोरै लापरवाहीका कारण उसले कष्ट भोग्नु पर्ने हुन सक्छ।
घाइतेको घाँटी वरिपरि सानो काठको टुक्रा राख्नुहोस्। बेहोस भएको घाइतेलाई उठाँउन बेसरि नझकझकाउँनुहोस।
यदि दुर्घटना बाइकबाट भएको छ भने, अस्पतालमा पुग्नु भन्दा पहिले घाइते व्यक्तिको टाउकोबाट हेलमेट ननिकाल्नुहोस्। यदि उसलाई सास फेर्न समस्या भएको छ भनेमात्र हेलमेट खोल्दिनुहोस। घाइतेलाई सास फेर्न कठिनाई भएको खण्डमा पुनरुत्थान प्रविधी वा मुख बाट स्वास प्रश्वासन प्रकिया अपनाउनुहोस्। जसले गर्दा पीडितलाई सास र्फेन मद्दत हुनेछ।